အောက်တွင် မြန်မာလိုဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် Written by Linn Thit AYA Bank signed an agreement with the Ministry of Electricity and Energy in the first week of this month to allow users in Yangon, Mandalay and Naypyidaw pay electricity bills via AYA iBanking, AYA mBanking or AYA Pay. The bank will charge K200 for the service,...
Huawei P40 Pro debuts in Myanmar
(English text below) ကင်မရာလုပ်ဆောင်ချက်ပေါင်း ၁၀မျိူးပါ၀င်သည့် Huawei P40 Pro ကို မြန်မာနိုင်ငံစျေးကွက်တွင် စတင်၀ယ်ယူနိုင် ကင်မရာပိုင်းတွင် ထူးခြားသာလွန်မှုရှိသည့်အပြင် နည်းပညာလုပ်ဆောင်ချက် ၁၀မျိုးအထိ ပါ၀င်သည့် Huawei P40 Proကို ယခုလမှစတင်၍ မြန်မာနိုင်ငံစျေးကွက်တွင် ကြိုတင်မှာယူမှုများပြုလုပ်နိုင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း Huawei Myanmar မှ သိရသည်။ အဆိုပါ စမတ်ဖုန်းတွင် နည်းပညာ၁၀မျိုးဖြစ်သည့် CMOS Sensor အသုံးပြုထားခြင်း၊ AF စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် Full Pixel Octa PD Autofocus အသုံးပြုထားခြင်း၊ Multi-Spectrum Colour Temperature Sensor နဲ့ AI AWB တွဲဖက် အသုံးပြုထားခြင်း၊ XD Fusion Engine...
Teachers in Myanmar will be able to enjoy free access to the Ministry of Education’s online platform for six months as Telenor Myanmar strengthens its support to sectors affected by the COVID-19 pandemic. To ensure equal access to these benefits, Telenor is also donating DBE Box - Department of Basic...
Written by Rajan Acharya There wasatime in Myanmar around 2002 the internet was only available in selected major cities costing K 500-1500 for 1 hour the connection is normally slow and often interrupts. Those painful days are in the past, now the internet is easily accessible through the...